The 20 International Fair maka Environmental Protection (IFAT) na Munich, e grandly ẹkenịmde ke New International Expo Center na Munich si May 14 na May 18, 2018. The Munich Expo e hiwere na 1966, ụwa kasị ọkachamara ahia ngosi maka gburugburu ebe obibi-echebe . Dị ka otu n'ime ndị isi na mba ngosi gbaara site UFI, ọ na-eduga ọhụrụ na-emekarị nke mba gburugburu ebe obibi-echebe ụlọ ọrụ na a ghọtara dị ka a zuru ụwa ọnụ na-egosi.
IFAT e ọma ẹkenịmde maka 19 sessions na bụ kasị na kasị mkpa ahia ngosi maka gburugburu ebe obibi-echebe ụlọ ọrụ. The ise ụbọchị ngosi ekpuchi ebe ndị 260.000 square mita. Ọ nwere 18 nnukwu-ọnụ ọgụgụ ngosi Ụlọ Nzukọ Alaeze na atọ n'èzí ngosi ebe. Ọ ada ọnụ 3.304 exhibitors si 59 mba na dọtara karịa 135.000 uwa ọkachamara ọbịa si 168 mba ileta na kpakorita.
IFAT Expo ka mgbe e weere dị ka ihe dị mkpa ohere maka anụ ụlọ na gburugburu ebe obibi-echebe ụlọ ọrụ ịbanye na mba ahịa. Ọtụtụ ọma-mara ụlọ na ndị mba ọzọ na gburugburu ebe obibi-echebe ụlọ ọrụ nwere na-akụkụ na a expo na egosipụta ha ụwa na-eduga na gburugburu ebe obibi-echebe teknụzụ. Niutech Environment Technology Corporation (dịrị gaba n'ime ebe kwuru na dị ka "Nituech") na-eweta mba eduga pyrolysis technology ngwá ọrụ IFAT. Ọ bụghị nanị na-enwe olileanya mụbaa ya mba azụmahịa site na nke a buru ibu trading n'elu ikpo okwu, ma na-na-ewetara ụwa na-ahụ na ịrị elu nke China na gburugburu ebe obibi-echebe ụlọ ọrụ, Ọzọkwa, jide ohere a kụziere ụka ma mgbanwe na J.Randall pavilions si n'ụwa nile, na-egosi na ụwa na-style na ike nke China nke gburugburu ebe obibi, oha na ụlọ ọrụ dị ihe niile na-gburugburu, multi-larịị, na obosara-sitere n'ụzọ.
China ma gbaara site EU OA na Germany TUV. The technology na akụrụngwa nwere ike etinyere a dịgasị iche iche nke ngwa na ike ga-eji na imegharị ihe maka iji nke elu-molekụla Polymers dị ka n'efu taya, n'efu plastik, mmanụ sludge, iche iche na ụdị nke n'efu mmanụ, mmapụta mmanụ, chemical n'efu, siri ike n'efu , na biomass. Nke a na ngwá nwere exported na Germany, Brazil, Hungary, Estonia, India, Thailand, Malaysia, Iraq, Taiwan na mba ndị ọzọ na mpaghara, merie olu otuto si ahịa.
Na ọwụwa China nke gburugburu ebe obibi, oha mkpa, ina maka gburugburu ebe obibi na nkà na ụzụ mgbanwe n'etiti anụ ụlọ na ná mba ọzọ na-aga n'ihu na-ebili. Dị ka isi nke Europe, Germany bụ otu n'ime ndị kasị ibu n'ụwa ahia emmepe karịsịa họọrọ ikpo okwu maka Chinese ụlọ ọrụ na-egosipụta ngwaahịa na teknụzụ ozugbo na ụwa. Dị ka a Chinese ụlọ ọrụ, Niutech bụghị nanị na-anọchi anya ụlọ ọrụ ika ike na oru larịị, ma na-egosipụta ike nke China na gburugburu ebe obibi-echebe ụlọ ọrụ. Niutech ga-etinye ya onwe ha nye mba ahịa na iru otu n'elu uwa gburugburu ebe obibi-echebe ngwá emepụta na gburugburu ebe obibi ọgwụgwọ technology na enye ọrụ.
Post oge: Jul-11-2018